Ryan Raynolds dia mizara sary iray tamin'ny andro voalohany nananganana ny sarimihetsika Spirited | Avy amin'ny mac aho
Mpilalao sarimihetsika Ryan Reynolds hnizara sary tamin'ny andro voalohany tamin'ny fanaovana ny sary avy amin'ny mozika ho an'ny Apple TV + Spirited, sary iray izay nahitana azy niaraka tamin'i Will Ferrell, ilay mpandray anjara voalohany amin'ilay horonantsary, raha manana ny AirPods Pro eo an-tsofiny izy.
Tao amin'ilay bitsika izay nandefasanao io sary io ihany, vazivazy amin'ny fanisana an'i Apple Miseho amin'ny fitaovan'ny iOS izany rehefa eo am-pametrahana fanavaozana ny rafitra vaovao (nandany efa ho iray volana ny fametrahana iOS 14.6 zavatra izay azo antoka fa tsy ho tian'ny Apple).
Andro voalohany nitifirana ny iray tamin'ireo sampy hatsikana, Will Ferrell. Tsy ho hitanao akory ity @Paoma sarimihetsika!
Ary ny iOS 14.6 dia hanomboka hametraka ao anatin'ny 7 segondra… pic.twitter.com/m4WNeIgGq4
- Ryan Reynolds (@VancityReynolds) Jolay 6, 2021
Ankoatra izany Ryan Reynolds sy Will Ferrell, ao amin'ny mpilalao an'ity mozika ity dia mihaona ihany koa isika Sunita mani araka ny nampahafantarinay anao andro vitsivitsy lasa izay.
panahy dia fampifanarahana mozika an'ny Tantara Krismasy nataon'i Charles Dickens, izay fantatsika ihany fa efa nanomboka ny fakana sary. tsy fantatray hoe rahoviana no kasaina ny première film, sarimihetsika izany, raha raisina ny lohahevitr'izy ireo dia mety ny mamoaka azy amin'ny Krismasy (raha maika ianao dia mety hanana fotoana hamoahana azy amin'ny Krismasy manaraka).
panahy it is Notarihin'i Sean Anders, izay hiaraka amin'i John Morris koa dia hanao ny asan'ny mpanoratra. Ao amin'ny famokarana dia i Ryan Reynolds miaraka amin'ny orinasam-pamokarana Maximum Effort ary Will Ferrell miaraka amin'ny orinasam-pamokarana Gloria Sanchez Productions.
Jessica Elbaum sy David Koplan koa dia am-pamokarana. Apple no nandoa 60 tapitrisa dolara mahery fotsiny tamin'ny ady an-trano teo anelanelan'ny Netflix, Warner Bros ary Paramount Pictures. hahazoana ny zon'ity mozika ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ryan Raynolds dia mizara sary iray tamin'ny andro voalohany nananganana ny sarimihetsika Spirited
Mialà amin'ny macOS beta, Spotify amin'ny Apple Watch, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Ny tranofiara ho an'ny andian-tsarimihetsika Apple TV + "Andriamatoa Corman" dia azo alaina izao